Laasqoray, 16 Mar 2014 (Alldhooftinle.com)
Siilaanyo Wuxuu Booqasho Taariikhda Gelisa Ku Tegey Laasqoray, Caasimada Maakhirland.
Madaxweynaha Somaliland Ahmed Mohamed Mohamud iyo wefti balaadhan oo uu watay ayaa booqasho aan hore loo shaacin ku tegey magaalada Laasqoray.
Safarka Madaxweynaha iyo weftigiisa oo ahaa mid aan hore loo shaacin ayaa waxay socod dheer ku soo mareen Wershedii Kaluunka ee Ruushku dhisay, Dekedii hore oo iskaba baaba'day iyo iskuulka magaalada Laasqoray.
Weftigan oo ahayd tii ugu miisaanka cuslayd ee abid timaada degaanka Maakhirland ayaa waxa Madaxweyne Siilaanyo la socday raxan wasiiro ah oo ay ka mid ahaayeen Wasiirka Gaashaandhiga Cadami (Ugaaslabe/ Bani Jacfar Almakhzuumi) oo isagu weftiga gadhwadeen ka ahaa iyo Wasiirka Kaluumaysiga Cali Buureed (Warsangeli/Dubbeys).
Madaxweyne Siilaanyo oo khudbad u jeediyey dadkii soo dhowayntiisa isugu soo baxay ayaa aad uga mahad celiyey Reer Laasqoray sida diirran ee kalgacalka, sharafta iyo qadarinta leh ee isaga iyo weftigiisa loogu soo dhoweeyey Laasqoray.
Madaxweyne Siilaanyo isagoo ka murugoonaya sida Laasqoray loo hilmaamay ayuu dhagax dhigay Deked cusub oo ay yeelan doonto magaalada Laasqoray iyo weliba balanqaad uu ka sameeyey dhisitaanka wadada Buurta ah, Geeldoora, ee isku xidha Laasqoray ilaa Hadaaftimo.
Imaanshahan weftigan heerka Madaxweyne ah oo aan wadan ciidan iyo askar ilaalineysa ayaa xiligii duhurkii uga ambabaxay Laasqoray dhinaca Maydh halkaas oo ay qadada ku lahaayeen.
Si kastaba ha ahaatee booqashadan oo ahayd mid xasaasi ah ayaa waxay jawaab u tahay booqashadii Madaxweyne Gaas ku yimid Badhan waqtigiisii Ololaha Doorashooyinka, waxayna dadka siyaadada u dhuun daloolaa ku sifeeyeen booqasho taariikhi ah oo mugdi gelinaysa Siyaadada Beer-la-xawsiga Iyo Awr-Ku-kacsiga ah ee ay Majeerteenku kula tacaalaan Makhirland.
Garaad Axmed Bin Jacfar AlMakhzuumi